MD Dr. Aadan Yuusuf Abokor: Hoggaamiye bulsho oo ku dayasho mudan | Dr. Jama Musse Jama
MD Dr. Aadan Yuusuf Abokor: Hoggaamiye bulsho oo ku dayasho mudan
Barmaamij qiime badan ay soo wada diyaariyeen Star TV iyo Maxadka Cilmibaadhista Nabadda ee Oslo (Peace Research Institute Oslo, ‘PRIO’) ee magaalada Oslo, dalka Norway, oo ah taxane ka hadlaya taariikhda kooxdii UFO, ayay qaybtiisa kowaad gaar ugu saabsan tahay Dr. Aadan Yuusuf Abokor. Hirgeliyeyaasha barmaamijka ayaa i waydiiyey in aan wax ka idhaahdo shaqsiyadda Dr. Aadan. Horeba waxa aan u mahadcelinayaa Star TV iyo Cilmibaadheyaasha PRIO ee mashruucan qiimaha leh dejiyey.
Dr. Adan qofnimadiisa iyo taariikhdiisa qofka la yidhi wax ka sheeg, waa qof la yidhi wax ka sheeg taariikhdii Somaliland iyo dedaalkii loo soo maray ahaanshaha jiritaanka iyo ummadnimo ee maanta.
Kolkii xumaantu dhacday, 1993-94kii, ee dadku kala jabay, ee dagaallada sokeeye la galay, Dr. Aadan waxa uu ahaa hormuudkii ka badheedhay ee isaga tallaabayay labada daamood ee Hargeysa, una kacay si ummaddan caqliga Ilaahay mar uun ugu soo celiyo.
Dadkuse waxa ay inta badan aanay ogayn ururrada aan dawliga ahayn, ha noqdeen dalladaha dhallinyarada iyo ururrada kale ee bulshada, aasaaskooda badankooda, in uu Dr. Adan u ahaa, walina u yahay, laf dhabar.
Dr. Aadan Yuusuf Abokor maanta waa waayeel, samotalis ah, waayo-arag ah oo lagala tashado kol kasta oo ay timaaddo arrin qarankan dani ugu jirto oo muhim ahi. Aniga gaar ahaan waa ii macallin aan ka talo qaato, wayna yar yihiin go’aammada bulsho ee aan qayb ka noqdaa, oo aanan kala tashan, amase aanu ka ahayn gadhwadeen. Waxa shaqooyinkaas ugu danbeeya Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa iyo Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa, labadana Dr. Aadan waxa uu ka mid yahay waayeelkooda iyo wadayaashooda.
Dr. Adan aqoon jacaylkiisa iyo akhris ogaalksiisa, waxa uu ka soo jeedaa kortaankiisii uu ku korey marsadii caanka ahay ee Cadan ee Koonfurta Yaman, dugsiga sarena ka burtay 1963-64, iyo waxbarashadii Jaamacadda Warsow ee Caasimadda dalka Poland dabayaaqadii lixdamaadkii. Waxa u maragfur ah sida uu si siman wax ugu akhristo, uguna hadlo, afafka Soomaaliga, Carabiga, Ingiriisida iyo Boolishka.
Ugu danbayn Dr. Aadan Yuusuf Abokor dad la dhaqankiisa iyo ummad isku hayntiisa waxa sal u ahaa ilaa yaraantiisii, walina u ah, laabxaadhnimo iyo kaftandhableh sumad u ah shaqsiyaddiisa wanaagsan ee samadoonka ah.
Waxa aan ilaahay uga rajaynayaa cimri dheer, caafimaad iyo cibaado suubban. Noolow.
London. 9 December 2018
Tagged: Hargeysa GroupSomalilandUFO
Transitioning from Oral to a Written Culture: The Impact of Hargeysa International Book Fair
TweetMuch more than just a book fair: the HIBF engages in transforming the
TweetLama helo wadaadow, waxaan cidi ku hawsheene! (A vous, amis, rien de b
TweetMadaxmeyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ayaa soo hordhigay golaha baa